Waa Maxay Sababta Boqortooyada Sucuudigu ula.Daahday Hambalyada Joe bidden |
HomeArrimahabulshadaWaa Maxay Sababta Boqortooyada Sucuudigu ula.Daahday Hambalyada Joe bidden
Waa Maxay Sababta Boqortooyada Sucuudigu ula.Daahday Hambalyada Joe bidden
Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxey ku qaadatay iney u hambalyeyso madaxweynaha dooran ee dalka Mareykanka Joe Biden 24-saacadood ka dib iyadoo dowladaha Caalamka ee xidhiidhka la leh Mareykanka ay Hoor horeba Hambalyeeyeen.
Dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa xidhiidh dhaw la lahaa Donald Trump, sidaas darteed wey ku adkaatay ayaa la leeyahay inuu dhaqso ugu hambalyeeyo Joe Biden oo guulo waaweyn gaadhay,
Sidoo kale madaxweynaha la filayo inuu afarta sano ee soo aadan hogaamiyo Mareykanka wuxuu sameeyay ballan qaadyo ka dhan ah boqortooyada Sacuudiga.
Waxyaabaha uu ballan qaaday Joe Biden waxaa ka mid ah inuu ku laaban doono heshiiskii hubka Nuclear-ka ee dowladda Islaamiga IRAN, iney wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka beni’aadanimo ee ay geystaan Sacuudiga iyadoo si gaar ah loo soo hadal qaaday dilkii Jamaal Kashoggi.
Sidoo kale Joe Biden wuxuu ka fiirsan doonaa Taageerada ay Mareykanku siinayaan dhigooda Sacuudiga dagaalka ka socda Yemen, waxyaabahaas ayaa ugu waaweyn sababta uu Maxamed Bin Salmaan u daahiyay fariintiisa hambalyada ee ku aadan Biden.
Warbaahinta waxey aad u hadal qaadeen dhabar jabka ku yimid xidhiidhka Mareykanka iyo Sacuudiga kadib doorashada Joe Biden, waxaana durba lasoo qoray hadalo lagu muujinayo sida ay u daran tahay dhirbaaxada ku dhacday boqoortoyada.
Inkastoo ganacsiga labada wadan uu meelo muhiim ah iskaga tiirsan yahay, hadana qof walba wuxuu sugayaa sida xidhiidhka labada dal uu usoo shaac baxo, balse cidna ma fileyso in Sacuudiga ku raaxeysanayaan natiijada doorashadii lagu doortay Joe Biden